Madaxwaynaha oo ka hadlay xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home BOGGA HORE Madaxwaynaha oo ka hadlay xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka
Madaxwaynaha oo ka hadlay xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa booqasho ku tagay maanta Isbitaalka Sheekh Sayd iyo xarunta safaaradda Imaaraadka uu ku leedahay Magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha J. Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa marka hore waxa uu booqdey Isbitaalka Sheekh Sayd ee dowladda Imaaraadku ay ka dhistay magaalada Muqdisho, kaas oo lagu daweeyo dadka deggan caasimadda si lacag la’aan ah.
Madaxweynaha oo uu wehliyey Sii haya xilka safiirka ahna ku xigeenka safiirka, ayaa soo indha-indheeyey qeybaha Isbitaalka uu ka kooban yahay, waxaana uu warbixinno ka dhageystay howl-wadeenna iyo Dhaqaartiir ay ku jiraan Soomaali.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa booqdey Safaaradda dowladda Imaaraadka ay ku leedahay Magaalada Muqdisho, iyadoo u jeedku yahay muujinta xiriirka wanaagsan ee u dhaxeeya labada dowladood.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa isaga oo ku sugan xarunta safaaradda Imaaraadka sheegay in dowladda Imaaraadka uu uga mahadcelinayo mashaariicda ay dalka Soomaaliya ka fulisay, sida Isbitaalka Sheekh Sayd iyo qeybo cusub oo dhismahoodu uu socdo hadda, dowladda iyo shacabka Soomaaliyeedna ay abaal uga hayaan.
Dhan kale madaxweynaha Jamhuuriyadda, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa sheegay in maalmahaan ay socdeen dicaayado lagu waxyeelleynayo xiriirka iyo saaxiibnimada u dhaxesyaa Imaaraadka iyo Soomaaliya, taasina ay been abuur tahay, booqashadiisuna ay astaan u tahay arrintaas, xiriirka labada dalka u dhaxeeyaana uu mar walbana yahay mid sii xooggeysanaya.
Sii haya xilka safiirka ahna ku xigeenka Safiirka Imaaraadka u fadhiya Soomaaliya Xamdaan Rashiid Al-Shamsa, ayaa dhankiisa uga mahadceliyey madaxweynaha Soomaaliya booqashadiisa safaaradda, waxa uu hoosta ka xariiqay in marnaba uusan xumaan xiririka Soomaaliya iyo Imaaraadka, labada dalna ay yihiin walaalo wax wadaqabsi uu ka dhaxeeyo.
Dowladda Imaaraadka waxa ay ka mid tahay dowladaha Caalamka ee Soomaaliya sannadihii u dambeeyey ka waday mashaariic waa weyn iyo taageero dhinacyo badan leh oo ay uga qeyb-qaadanayaan dib u dhiska Soomaaliya.
Previous articleXasan Sheekh “kulanka ugu horeeya ee Baarlamaanka waxaa uu dhici doonaa 2 maamlmood ka dib
Next articleXaaladda qaxooti Kenya laga soo ciliyay oo laga dayriyay